‘समस्या समाधानको प्रयासमा छौं’ - Pradesh Today ‘समस्या समाधानको प्रयासमा छौं’ - Pradesh Today
२०५५ मंसिर ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको साझा स्वास्थ्य केही दिनदेखि बन्द छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र साझाबीच विवाद सिर्जना भएपछि साझाले दिदै आएको सेवा ठप्प भएको छ । के कारणले सेवा ठप्प भएको छ ? भन्ने विषयमा साझा स्वस्थ्य सेवा दाङ शाखा प्रमुख वेलबहादुर पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुतिः सपना बोहरा
१. साझा स्वस्थ्य सेवा कहिले स्थापना भएको हो ?
२०५५ मंसिर ७ गते तत्कालीन महेन्द्र अस्पताल’सँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतानुसार साझाले अस्पताल कै भवनमा बिक्री कक्ष खोलेर सेवा सुरु गरेको थियो । राप्ती स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रै एककोठे भवन साझाले आफ्नै लगानीमा बनाएको छ । देशभर अस्पतालले उपलब्ध गराउने जग्गामा साझाले आफ्नै खर्चमा औषधि बिक्री कक्ष बनाउने गरेको छ । यो सँगै जग्गा प्रयोग गरेबापत करसहित १ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा साझाले प्रतिष्ठानलाई तिर्दै आएको पनि अवगत गराउँछु । दाङ जिल्लामा साझा स्वास्थ्य सेवाका घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा गरी तीनवटा बिक्री कक्ष छन् ।
२. के–के सेवा दिइरहेको छ ?
दाङमा साझा सेवाको इतिहास तत्कालीन महेन्द्र अस्पतालसँग जोडिएको छ । तत्कालीन महेन्द्र अस्पताल हुँदादेखि नै साझाले अस्पतालभित्रै रहेर सेवा दिदै आएको थियो । साझा स्वास्थ्य सेवाले जनतालाई दिनुपर्ने सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । । जनताको लागि आवश्यक पर्ने जीवनउपयोगी सबै औषधिहरु सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जो सिङ्गो साविक राप्तीबासीलाई थाहा छ । साझा त समुदायलाई अरुभन्दा सस्तोमा औषधि बेच्ने संस्था हो । जनतालाई राहत दिने संस्थाको सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । लाइफ सेभिङ ड्रगहरूसहित करिब ७० लाखको औषधि तथा उपकरणहरूमार्फत साझाले सेवा दिइरहेको छ ।
३. अहिले प्रतिष्ठानको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन छ, कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?
मैले पहिले पनि जानकारी गराइसकेको छु । साझाको इतिहास तत्कालीन महेन्द्र अस्पतालसँग जोडिएको छ । त्यसपछि स्तरोन्नति भएर राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा परिणत हुँदा पनि साझाले सेवा दिदै आएको थियो । तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफैले भवन निर्माण गरेर सेवा दिनु भनेर पत्र लेखेको थियो र त्यही अनुसार भवन बनाएर सेवा विस्तार गरिरहेको थियो । त्यही अवस्थामा फेरि उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भैसकेपछि शुरुको दिनदेखि नै समन्वय राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।
यो दुःखलाग्दो कुरा हो । प्रतिष्ठानले हैकमवादी प्रवृत्ति देखाएर साझा सेवालाई बारम्बार हाम्रो जग्गामा निर्माण भएको छ, तुरुन्त छोड्नु प¥यो, हाम्रो आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गर्छौ भन्ने जस्ता किसिमका पटक–पटक साझाले सम्झौताको अवधि हँुदा पनि आफ्नो सेवाबाट बञ्चित गराउने चेष्टा गरिरहेको थियो । तर त्यसको बाबजुद यहाँको जनताहरु, नागरिक समाजको सहकार्य र सहयोगले प्रतिष्ठान केही समयपछि हट्यो । साझा र प्रतिष्ठानको उद्देश्य एउटै भएपनि समन्वय राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।
४. समन्वय किन हुन सकिरहेको छैन ?
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालभित्र प्रवेश गर्नेहरूको शरीरमा अटोमेटिक औषधि छर्किने प्रविधियुक्त स्यानिटाइजिङ मेसिन जडान प्रक्रिया सुरु गर्¥यो । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ती छैन । स्यानिटाइजिङ मेसिन जडानका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै प्रतिष्ठानले साझालाई २०७६ चैत २८ गते पत्र पठाएको थियो । साझा स्वास्थ्य सेवाको बिक्री कक्षको उत्तरतर्फको दुईवटै झ्याल अवरोध नहुने गरी स्यानिटाइजिङ मेसिन जडान गर्न सकिने व्यहोरासहित हामीले प्रतिष्ठानलाई जवाफ पठायो । तर, प्रतिष्ठानले साझाको औषधि बिक्री कक्षका दुवै झ्याल अवरोध हुने गरी स्यानिटाइजिङ मेसिन राखिदियो । त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
स्यानिटाइजिङ मेसिन राख्ने अन्यत्र प्रसस्त ठाउँ हुँदा पनि हाम्रो सेवामा अवरोध हुने गरी मेसिन जडान गरेको छ । जो तपाईले पनि देख्न सक्नुहुन्छ । यही कारण साझा स्वास्थ्य सेवाले औषधि बिक्री कक्ष बन्द हुन पुगेको छ । औषधि किन्नेहरूका लागि बनाइएका झ्यालहरू नै बन्द हुने गरी स्यानिटाइजिङ मेसिन राखिदिएकाले हामीले सेवा कसरी प्रदान गर्ने ? स्यानिटाइजिङ मेसिन राख्नका लागि प्रशस्त ठाउँ थियो, हाम्रा झ्याल नै बन्द गर्नुपर्ने थिएन होला नि ?
५. पुनः सेवा सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता प्रयास भैरहेका छन् ?
पुनः सेवा सञ्चालनको लागि हामीले सबै सरोकारवालाहरुलाई सहजीकरण गरिदिनको लागि पत्राचार गरेका छौं । घोराही उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराएका छौं । यसको साथ–साथै तालुकवाला मन्त्रालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सेवा सुचारु गर्नको लागि पत्राचार गरेका छौं । आशा छ हामीलाई ६५% शेयर र सञ्चालक समितिमा बढीमा ९ जना वा ५ जना सरकारबाटै आउने भएकोले अब सेवा सुचारु गर्नको लागी केही पहल हुनेछ । यो पूर्णरुपले सेवा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छौं । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको औषधि बिक्री कक्ष बन्द हुँदा औषधि उपभोक्तालाई असर परिरहेको छ । त्यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।
६. प्रतिष्ठानको प्राङ्गणभित्र नै साझाले सेवा दिनुपर्छ भन्ने छ र ?
साझा एउटा नेपाल सरकारको ६५% शेयर लागानी भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था भएको हुनाले जनताको सेवामा औषधिको क्षेत्रमा जेठो संस्थाको रुपमा भएकाले यसलाई मास्नु हुँदैन ? यसले सेवा निरन्तर दिनुपर्छ । सर्वसाधारण जनताहरु अस्पतालभित्रै आउँछन् । त्यहाँ निमुखा, असहाय बिरामी आउने हुँदा उनीहरु ठगिनु हँुदैन । सर्वसुलभ औषधि पाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ साझा अस्पतालभित्रै रहनुपर्ने आवश्यकता हो । नत्र भने साझाले आफ्नो सेवा त जहाँ पनि विस्तार गर्न सक्छ । त्यही पनि जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पाउने भनेको अस्पताल भित्रै बसेर हो । अस्पतालकै भवनमा आउँदा बिरामीले औषधि किन्दाखेरी प्राइभेट औषधि पसलमा नठगिउन र गुणस्तरीय औषधि पाउनबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने ध्येयका कारण अस्पताल हाताभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि हो, दिन पाउनुपर्छ ।
७. सबै प्रकारको औषधि उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ त ?
अहिलेको अवस्थामा पनि साझाले आफूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न एम्बुलेन्समार्फत सबै औषधि पर्याप्त रुपमा पु¥याउने जमर्को गरिरहेका छौं । अहिले हालसम्मलाई औषधिको असुविधा देखिएको छैन । निरन्तररुपमा पनि सेवाको लागि कार्ययोजनाको साथ साझाको टिम लागिपरेको छ । जनतालाई सेवा दिनको लागि कुनै पनि कसुर नराखी औषधि पर्याप्त रुपमा ल्याउनको लागि आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ ।
८. साझाले नवीकरण गर्न नआएपछि बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आएको प्रतिष्ठानको आरोप छ त ?
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा स्वायत्त संस्था त हो । तर नेपाल सरकारकै अधिनमै रहेको संस्था हो । त्यसले गर्दा साझा स्वास्थ सेवा पनि एउटा नेपाल सरकारकै अंग हो । त्यसैले गर्दा दुबैको सहकार्यमा सेवाभावको हिसाबले प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा नभएको औषधिहरु साझाले परिपूर्ति गरेको छ । यस अर्थमा पनि प्रतिष्ठानले नवीकरण गर्नुपर्छ कि आफूलाई सहकार्यको भूमिकाको रुपमा साझा रहेको छ भन्ने अनुभूतिका साथ नवीकरण गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको आवश्यकता देखिएको छ ।
९. साझाले नवीकरण नगरेको कि प्रतिष्ठानले नगरेको ?
साझा स्वास्थ्य सेवाले जहिले पनि नवीकरण गरेर कानुनी रुपमा अगाडि जानको लागि प्रतिष्ठानसँग हारगुहार गरेकै हो । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र प्रतिष्ठानबाट नवीकरण नभएको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि प्रतिष्ठानले साझा हामीलाई चाहिदैन, हाम्रो फार्मेसी छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ । त्यो फार्मेसीले कति सेवा सुविधा दिएको छ भन्ने विषयमा गौणरुपले लिनुहुँदैन । प्रतिष्ठानले नवीकरण आवश्यक छैन भनेपनि जनताको लागि आवश्यक छ । त्यसकारण हामी नवीकरणको आशामा छौं । तर उहाँहरु नवीकरणको पक्षमा हुनुहुन्न । तर नवीकरणको पक्षमा हुनुपर्छ र जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्नेता हो ।
१०. सरकारका दुबै अंगबीच विवाद उत्पन्न हुनु राम्रो पक्ष हैन नि ?
जनताले सोचेको पनि यहि हो । चाहेको पनि यहि हो । दुबै सरकरी निकाय हो । किन समन्वय नभएको कुरा त्यो स्वभाविक नै हो । त्यो हामीले पनि बुझेका छौं । तर प्रतिष्ठानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ब्यक्तिको सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो । यो संस्था सरकारी मातहतकै हो । हामी पनि सरकारी बजेटबाटै चलेका हौं । प्रतिष्ठान स्वायत्त भएपनि सहकार्यको भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ध्येय उहाँहरुमा पनि सिर्जित हुनैपर्छ र त्यो हामिमा पनि सिर्जित भएको छ । प्रतिष्ठानलाई हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग कहिले पनि चुक्ने छैन र प्रतिष्ठानले पनि यो सहकार्यको भूमिका खेल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
११. साझा नाफामुखी संस्था हो, जहाँ पनि व्यापार गर्नसक्छ भन्ने टिप्पणी छ नी ? यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
संस्थामा सबै कर्मचारी हुन्छन् । त्यसको खर्च हुन्छ । त्यसमा भएका विभिन्न किसिमका खर्चलाई मेनटेन गर्ने र त्यसलाई सुचारु रूपमा दीर्घकालिन रुपमा अगाडी बढाउने र सेवा दिने संस्थाको विभिन्न पाटोहरुमा सीमित मुनाफाको साथमा चल्ने सर्वविदित नै कुरा हो । त्यो कुरामा हामी नकार्न सक्दैनौं । तर पनि सेवा कसरी दिएको छ र जनताले कसरी पाएका छन् ? भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले तुलनात्मक कुराको रुपमा जनतालाई सेवा दिएको अवस्था हो ।
यो जनताले महसुस गरेका पनि छन् । जनतालाई थप सेवाको लागि कार्ययोजना बनाएको छौं । नाफामूलक संस्था भन्ने बितिकै पूर्णरुपमा नाफालाई मात्र केन्द्रित गरेका छैनौं । हामीले सबै ठाउँमा कर्मचारीको वर्गीकरणको साथ कर्मचारी राखेका छौं । कुनै घाटामा गएको अवस्थामा परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर संस्था टिकाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । र सेवा दिनु पनि मुख्य जिम्मेवारी हो । हामी पछि हटेका छैनांै । त्यसैले नाफामूलक भनेर अहिलेको परिप्रेक्षमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
१२ . अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
यो सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व संस्था हो । प्रतिष्ठान पनि सरकारबाट सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो । स्वायत्त संस्था भए पनि एउटा समन्वयकारी भूमिकामा दुबै संस्था उभिनुपर्छ । दाङमा रहेको राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान र साझा स्वास्थ्य सेवाको बिक्री कक्ष निरन्तर रुपमा सहकार्यका साथ अघि बढोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ शुभकामना दिन चाहन्छु । नागरिक समाज पनि त्यसलाई बुझेर प्रतिष्ठान र साझाको आवश्यकता बुझेर हातोमालेका साथ अगाडी बढाउनको लागि निर्णयकारी भूमिकाको साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । सेवा प्रवाहमा कुनै किसिमको कसुर नराखी जनताको सेवामा तत्पर लाग्ने छु । साझा स्वास्थ्य सेवा कहिले बिचलित हुनेछैन र सदैव सेवा दिने उचित वातावरण मिलोस् भन्न चाहन्छु, धन्यवाद !